Philippine: Hogaamiyayaasha ISIS oo lagu dilay hawlgalka Marawi • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Philippine: Hogaamiyayaasha ISIS oo lagu dilay hawlgalka Marawi
Philippine: Hogaamiyayaasha ISIS oo lagu dilay hawlgalka Marawi
October 16, 2017 - By: HORSEED STAFF
Dowlada Filibiin ayaa maanta oo Isniin ah shaacisay in la dilay labadii hogaamiye ee ugu sareeyey kooxda Daacish ee qabsaday magaalada Marawi ee koonfurta dalkaasi.
Hawlgalkii ugu danbeeyey oo ay militariga Filibiin ka sameeyeen magaalada Marawi ayaa la sheegay in lagu dilay Amiirkii Kooxda Daacish ee halkaasi ku sugnaa oo lagu magacaabo (Isnilon Hapilon) iyo mid kamid ah hogaamiyayaashooda oo lagu magacaabo (Omarkhayam Maute).
Wasiirka Difaaca ee Filibiin Delfin Lorenzana oo saaka shir jaraa’iid qabtay ayaa sheegay in dilka raggan ay u xaqiijiyeen dadkii ugu danbeeyey ee la heysta yaasha ahaa ee laga soo badbaadiyey magaalada Marawi.
Kooxda Daacish ee laga dhisay dalkaasi Filibiin ayaa waxaa u badnaa kooxdii xagjirka ahayd ee la oron jiray Abu Sayef, waxayna gacan ku heynta magaalada Marawi la wareegeen bishii May ee sanadkan.
Magaalada Marawi ayaa ah magaalada kaliya oo ay u badan yihiin muslimiin kuna taal jasiirada Mindanao. Ciidamada dowlada ayaa lagu dhaliilay in muddo dheer ay ku qaadatay inay kooxdaasi ISIS ka saaraan magaaladaasi.
Madaxweynaha France oo shacabkiisa raali gelin siiyey
Theresa May oo dib u dhigtay cod u qaadistii heshiiska Brexit
Sudan Guddoomiye gobal iyo saraakiil sare oo ku dhintay shil diyaarad
Banaanbaxyada Paris oo khasaaro badan dhaliyey